सृष्टिकर्ताले मानिसलाई प्रमोदवन दिनुहुन्छ | बाइबल सन्देश
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अल्बेनियन अस्ट्रेलियन साङ्केतिक भाषा आइरिस आइसल्याण्डिक आम्हारिक आसामी इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इन्डोनिसियन साङ्केतिक भाषा इलोको उङ्गाबेरे उज्बेक उज्बेक (रोमन) उड्मुर्त उर्दू उर्होबो एस्टोनियन एस्टोनियन साङ्केतिक भाषा ओतोमि (मझक्विटल उपत्यका) ओसेसियन कम्बोडियन करेन (गः) काजाक काबाइली किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज किश कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस सोरानी केक्ची कोंकनी (देवनागिरी) कोंकनी (रोमन) कोरियन कोरियन साङ्केतिक भाषा कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्युबान साङ्केतिक भाषा क्यूबेक साङ्केतिक भाषा क्रोएसियन क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्षोसा गाउरानी गुजराती ग्रीक ग्रीक साङ्केतिक भाषा ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चिनियाँ साङ्केतिक भाषा चियाओ चेक चेक साङ्केतिक भाषा चोल जर्जियन जर्मन जापटेक (इस्मस) जापटेक (लाचिगुइरी) जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा जिम्बावे साङ्केतिक भाषा जुलू झेल्तल टगालोग टर्कमेन टर्किश टाटार डच डच साङ्केतिक भाषा डिगोर डुआला डेनिश तरहुमरा (मध्य) ताजिकी तामिल तारास्कान तेलगु तोजोलबल तोतोनक त्लापनेक त्सोंगा थाई नर्वेली नाभाहो नाह्वाटल (ग्वेरेरो) नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) निआस निकारागुआन साङ्केतिक भाषा नेपाली नोंगा पंगासिनन् पंजाबी पारसी पेरुभियन साङ्केतिक भाषा पोर्चुगिज पोर्चुगिज साङ्केतिक भाषा पोलिश पोलिश साङ्केतिक भाषा फिनिश फिनिश साङ्केतिक भाषा फुलफुल्डे (क्यामरून) फेरोई फ्रान्सेली बंगाली बाटाक (टोबा) बाश्कीर बासा (क्यामरून) बिकोल बुल्गेरियन बोउलो ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मङ्गोलियन मझतेक (हुआट्ला) मझाहुआ मडागास्कर साङ्केतिक भाषा मले मल्यालम मापुडुङ्गुन माम माया मालागासी माल्टिज मिक्सटेक (ह्वाजुआपान) मिजो मिस्किटो मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन रोमानी (दक्षिणी ग्रिस) लाओशियन लाट्भियन लो जर्मन वारे-वारे शोना सिंहला सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सोट्सेल सोमाली स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
परमेश्वर भौतिक ब्रह्माण्ड र पृथ्वीमा जीवित प्राणी सृष्टि गर्नुहुन्छ; सिद्ध पुरुष र स्त्री सृष्टि गरेर तिनीहरूलाई एउटा सुन्दर बगैंचामा राख्नुहुन्छ र तिनीहरूले पालन गर्नुपर्ने आज्ञा दिनुहुन्छ
“आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो।” (उत्पत्ति १:१) यी शब्दहरूलाई अहिलेसम्म लेखिएका सुरुका शब्दहरूमध्ये सबैभन्दा प्रख्यात मानिएको छ। यो सरल तर सानदार वाक्यद्वारा बाइबल हामीलाई पवित्र धर्मशास्त्रका मुख्य व्यक्ति—सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर यहोवालाई चिनाउँछ। यो विशाल भौतिक ब्रह्माण्डलगायत हामी बसिरहेको ग्रहको सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी बाइबलको पहिलो पद प्रकट गर्छ। त्यसपछिका पदहरूअनुसार लाक्षणिक अर्थमा दिनहरू भनी चिनाइएको लामो समयावधिमा परमेश्वरले प्रकृतिका सम्पूर्ण अद्भुत कुरालाई सृष्टि गरेर पृथ्वीलाई हामी बस्न योग्य घर बनाउनुभयो।
परमेश्वरले पृथ्वीमा सृष्टि गर्नुभएको सबैभन्दा विशिष्ट प्राणी मानिस थियो। परमेश्वरकै स्वरूपमा अर्थात्‌ प्रेम र बुद्धिजस्ता यहोवाका गुणहरू झल्काउन सक्नेगरि सृष्टि गरिएको प्राणी मानिसमात्रै थियो। परमेश्वरले मानिसलाई भूमिको माटोबाट बनाउनुभयो। उहाँले ती मानिसलाई आदम नाउँ दिनुभयो र तिनलाई प्रमोदवन अर्थात्‌ अदनको बगैंचामा राख्नुभयो। परमेश्वर स्वयम्ले त्यो बगैंचा लगाउनुभयो र सुन्दर अनि फल दिने रूखहरूले भर्नुभयो।
मानिसको लागि जोडी आवश्यक परेको परमेश्वरले याद गर्नुभयो। आदमको एउटा करङ निकालेर परमेश्वरले स्त्री बनाउनुभयो र उक्त स्त्रीलाई आदमकी पत्नीको रूपमा तिनीकहाँ ल्याउनुभयो। पछि ती स्त्रीको नाउँ हव्वा राखिदिनुभयो। दङ्ग पर्दै आदमले कवितात्मक शैलीमा यसो भने: “यो ता मेरै हाडको हाड र मासुको मासु हो।” परमेश्वरले भन्नुभयो: “यसैकारण मानिसले आफ्ना आमा-बाबुलाई छोड्छ, र आफ्नी स्वास्नीसँग मिलिरहन्छ, औ तिनीहरू एउटै जीउ हुन्छन्‌।”—उत्पत्ति २:२२-२४; ३:२०.
परमेश्वरले आदम र हव्वालाई दुइटा आज्ञा दिनुभयो। पहिलो, उहाँले पृथ्वीलाई खनजोत तथा हेरविचार गर्न र तिनीहरूका सन्तानले पृथ्वी भर्दै जान भन्नुभयो। दोस्रो, त्यो विशाल बगैंचामा भएका रूखहरूमध्ये “असल र खराबको ज्ञान दिने रूखको फलचाहिं” नखान आज्ञा गर्नुभयो। (उत्पत्ति २:१७) आज्ञा नमानेको खण्डमा तिनीहरू मर्ने थिए। यी आज्ञाहरू पालन गरेर परमेश्वरलाई आफ्नो शासक स्वीकारेको देखाउने मौका उहाँले तिनीहरूलाई दिनुभयो। आज्ञा मान्दा तिनीहरूले प्रेम र कृतज्ञता देखाउने मौका पनि पाउने थिए। उहाँको दयालु शासन स्वीकार्नुपर्ने हर कारण तिनीहरूसँग थियो। ती सिद्ध मानवमा कुनै त्रुटि थिएन। बाइबल भन्छ: “आफूले बनाउनुभएको हरेक कुरा परमेश्वरले हेर्नुभयो। औ हेर, त्यो साह्रै राम्रो थियो।”—उत्पत्ति १:३१.
— उत्पत्ति अध्याय १ र २ मा आधारित।
मानिसजाति तथा तिनीहरूको घर पृथ्वीको सृष्टिबारे बाइबल कसरी व्याख्या गर्छ?
पुरुष र स्त्रीका लागि परमेश्वरले कस्तो किसिमको जीवन सम्भव बनाउनुभएको थियो?
पहिलो मानव जोडीलाई परमेश्वरले कस्ता आज्ञाहरू दिनुभयो?
पवित्र धर्मशास्त्रले परमेश्वरलाई विभिन्न पदवीहरूद्वारा चिनाउँछ। जस्तै: सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर आदि। केही पदवीले पवित्रता, शक्ति, बुद्धि र प्रेमजस्ता उहाँका गुणहरूलाई जोड दिन्छ। तर परमेश्वरले आफूलाई एउटा बेजोड नाउँ पनि दिनुभएको छ—यहोवा। बाइबल लेखिएको मौलिक भाषाहरूमा यो ईश्वरीय नाउँ लगभग ७,००० पटक प्रयोग गरिएको छ। पहिलो प्रयोगचाहिं उत्पत्ति २:४ मा भएको छ। यहोवा नाउँको अर्थ हो, “उहाँले गराउनुहुन्छ।” यो थाह पाउनु सान्त्वनादायी छ किनभने यसको अर्थ हो, परमेश्वर आफ्नो मनमा भएको जुनसुकै उद्देश्य हासिल गर्न सक्नुहुन्छ र आफूले गरेका हरेक प्रतिज्ञा पूरा गर्न सक्नुहुन्छ।